Ismaaciil Quraanka Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Inta badan saaxiibadeey, markii aannu ka wada hadalno allabariga Nebi Ibraahim (NNKH) ee willkiisa, ayaa shaaca ka qaaday in wiilkaasu uu ahaa kii lagu allabaryi gaaray ahaana Hasraat Ismaaciil (ama Ishmael) – wiilkii weynaa ee Nebi Ibraahim (NNHK) ay u dhashay Xaagaar, oo aan ahayn Isxaaq (Isaac),wiilkii yaraa ee Sahra (saarah). Sidaa daraadeed, aad baa ula yaabay markii aan ka akhriyey qaybo ka mid ah Quraanka arrintan. Markii aan tusay tan saaxiibadeey iyaguna sidoo kale waxay noqdeen kuwo aad ula yaabay. Sidaas hadaba maxay leedahay? Calaamadii 3 ee Ibraahim. Waxaan eegay dhacdadan muhiimka ah, oo waxaan soo qaadan qaybtan oo dhan Ka yimid Kutubtii: Calaamadii 3 ee Ibraahim. Waxaan ku celinayaa Ayaada gaarka ah mar kale halkan
Markaas, marka (ina) gaaray (da’da) (dhab ah) isaga la shaqeeyo, waxa uu yiri: “O wiilkayga, waxaan arkaa in aragtida aan kuu bixisaan allabari:! Hadda arag waxa uu yahay kaa view” (The ina) ayaa yiri: “aabow samee sidii lagu faray, waxaad heli doontaa, hadduu Eebe doono inaan kamidnoqdo kuwa samree (Al-Saffat 37: 102)!
Waxaad arki kartaa in magaca wiilka aan lagu sheegin qaybtan la xiriira allabariga wiilkii Ibraahim (NNKH). Sidaas aawadeed arrintani waxay noqotay mid lagu wareero. Marka wax wareer uu jiro waxaa fiican in la sameeyo baaritaan dheeraad ah, oo dhamaystiran iyo daraasad waxbarasho. Haddii aad ka raadino guud ahaan Quraanka oo dhan, markii Nebi Ismaaciil (ama Ishmael) lagu sheegay magiciisa waxaan ka arki karnaa in magaciisa lagu sheegay 12 jeer. In laba ka mid ah isaga keligii uu yahay kan kaliya la odhan karo in lagu sheegay oo lagula sheegay Ibrahim aabbihiis (2:125, 2:127). Shan ka mid ah waxaa lagula sheegay Ibraahim iyo walaalkiis Isaaq (3:84, 4,163, 2:133, 2:136, 2:140).  Shanta kale waxaa lagu sheegay isaga oo aan aabbahiis Ibraahim sheegin, laakiinse waxa uu qoraalka kula jiraa nebiyadii kale (6:86, 14:39, 19:54, 21:85, 38:48).  Labada jeer ee lagu xusay keligiis aabbihiis Ibraahim (NNKH) baa lagu xiriiriyey ayaad ka arki kartaa in ay ka hadlayaan dhacdooyinka kale oo la xiriira salaadda – ee aan ahayn allabari.
Xusuusnow ka yeeley baydka meel shirka ragga iyo meel nabad ah, oo ciidankii reer Ibraahim meel lagu tukado inaad qaadato; waxaana kula ballamay Ibraahim iyo Nabi Ismaaeiil, wuxuu u sheegay inay u Daahirina Gurigayga kuwa ku koobayaan ku wareegsan, ama u isticmaalo sidii dib u gurasho ah, ama u sujuudin, ama u Sujuuda (Dhexdeeda Salaadda). (The Cow: 125)
Xusuusta Ibraahim iyo Nabi Ismaaeiil iyagoo aasaaskii House ee (Iyada oo salaadda this) sara kiciyey: “Eebow (adeeggan) naga aqbal:!. Waayo, waxaad tahay All-Maqalka, wax walba og (The Cow: 127)
Sidaa darteed Quraanka marnaba laguma qeexin in ay ahayd Ismaaciil kii lagu imtixaamay allabarigii, waxa kaliya oo ay leedahay ‘wiilkii’. Sidaas daraadeed maxaa loo aaminsan yahay in ay ahayd Ismaaciil oo lagu tijaabiyey allabarigii?
Falaqayntii Allabariga ee Wiilkii Ibraahim
Yuusuf Cali (oo aan turjumaadiisi ee Quraanka aan isticmaali doono) waxa uuna yahay qof aad loo tixgeliyo faallooyinkiisa ee Quraanka iyo sidoo kale turjumaadiisaba. Faallooyinkiisa waxaa laga heli karaa http://al-quran.info
Qormooyinkan ku saabsan qaybta allabariga (ka yimid al- Saffat taasoo aanu ku isticmaalnay Calaamadii 3 ee Ibraahim) waxaad ka heli doontaa labadan qormooyin soo socda oo wiilka lagu allabari lahaa.
4071  Tani waxa ay ahayd dalkii barwaaqaysanaa ee Suuriya iyo Falastiin. Wiilkan sidaas ku dhashay, innagoo raacayna xeerkii Muslimka, wiilkii hore u dhashay ee Ibraahim,viz., Ismail. Magaca laftiisa waxa uu ka yimid Saamiya, la maqlo, maxaa yeelay, Ilaah wuu maqlay salaadda Ibraahim (aayadda 100). Ibraahim da’diisu waxay ahayd 86 jir markii uu Ismail dhashay (Bilowgii.16:16).
4076 Annaga sida aan u aragno waxaa loo barbar dhigi karaa Yuhuudda – Misiixiyiinta waxay ka qabaan wakhtigan. Dhaqanka Yuhuudda, si ay u ammaanaa laanta yar ee qoyska (ka yimid Isxaaq), awoowaha Yuhuudda dhalay, ka gedisan laanta weyn, ka yimid Ismaaciil, awoowaha Carabta, waxaa loola jeedaa allabarigan Isxaaq (Bilowgii.22:1-18). Haddaba hadda Isxaaq waxa uu dhashay markii Ibraahim uu ahaa 100 sano jir (Bilowgii 21:5), halka Ismaaciil uu u dhashay Ibraahim markuu Ibraahim uu ahaa 86 sano jir (Bilowgii.16:16). Sidaas daraaddeed Ismaaciil 14 sano ayuu ka weynaa Isxaaq. 14kii sano ee hore, uguna horreeyay Ismaaciil ayaa ahaa wiilkiisa kaliya ee Ibraahim; waqtina ma uusan ahayn Isxaaq wiilka keliya ee Ibraahim. Weliba, hadaan ka hadalno allabarigii, Axdiga Hore wuxuu leeyahay (Bilowgii. 22: 2) ‘Wuxuu ku yidhi, kaxee Hadda wiilkaaga, wiilkaaga keligiis ah Isaaq, kii aad jeceshahay, oo waxaad la tagtaa dalka Moriyaah; oo waxaa isaga u bixisaa halkaas allabari… ”
Sababta kaliya ee aragtidan in uu yahay Ismaaciil oo uusan ahayn Isxaaq lagu allabari waayey waa ku saleeyay ‘dhaqan Muslim’. tixraac ahna oo uu ku sameeyay Qormooyinkii Quduuska ahna ma uu jiro. Yusuf Ali qoraalkiisii labaad waxa uu ku dooday mar haddii Tawreed leeyahay ‘kaxee wiilkaaga, wiilkaaga keligiis ah Bilowgii 22:2) iyo Ismaaciil oo ahaa 14 sano mid ka weyn, ka dibna Ismaaciil kaliya ayaa loo bixin karaa allabari maadaama uu yahay ‘wiilkaaga keligiis ah’. Laakiin waxa uu iska indhatirayaa xaqiiqada ah in markii hore, sida ku qoran Bilowgii 21, Ibrahim (NNKH) diray Ismaaciil Iyo Xaagaar una diray meel shishe ay sabab u ahayd xiisada ka dhex aloosan qoyskiisa. Sidaas darteed, Bilowgii 22 Isxaaq wuxuu ahaa dhab ahaantii ‘wiilkaaga keligiis ah’, tan iyo Ismaaciil baa lagu faqooqay. Tan waxaa lagu sharaxay faahfaahin dheeraad ah qoraalkayga halkan lagu daabacay.
Wiilkii Ibraahim baa lagu allabaryi jiray: Markhaati furida Tawreedka
Sidaas aawadeed Quraanku ma sheegin wiilka uu yahay, laakiin Tawreedka waa mid aad ugu cad. Sida aad ka arki karto Kitaabka Quduuska ah, Bilowgii 22 ayaa sheegaya Isxaaq magaciisa lix jeer oo kala duwan (22:2,3,6,7 (2 jeer),9).
Tawreedka waxaa taageeray Nabi Maxamed (NNKH)
Taasi Tawreedka sida aynu u leenahay maanta waxaa taageeray Nabi Maxamed (NNKH), waa mid aad ugu cad kana yimid Xadiisyadda. Qoraalkayga halkan lagu daabacay sheegaya dhowr xadiis, mid ka mid ah oo dhigaya in
Qisadii Abdullah Ibn Cumar: group ..A Yuhuudda u yimid oo ku casuumay Rasuulka Alle (SCW) in Quff. … Waxay ku yidhaahdeen: ‘AbulQasim, mid ka mid ah ragga ayaa ka sinaysatay qof dumar ah, sidaa darteed, Ninkanu xukunka iyaga ku soo kor ‘. Waxay kooxda kaalinta barkin ah Rasuulka Alle (SCW) oo ku dul fadhiisatay oo wuxuu ku yidhi: “keena Tawreed”. ka dibna waxaa loo keenay. Ka dibna wuxuu ku noqday barkin hoosta isaga iyo kaalinta Tawreed waxa on isagoo leh: “. Waxaan rumeysan yahay adiga iyo isaga yaa kaa shaaca ka qaaday” sunankiisa Abu Daawuud Book 38, No. 4434:
Tawreedka waxaa taageeray Nabiga Ciise Masiix (NNKH)
Nebi Ciise Masiix (NNKH) waxa uu sidoo kale taageeray Tawreedka siday maanta tahay sida aan ku aragnay qoraalkayga la daabacay sida uu xaqiijiyay in buugaagta ugu horeeysay waxay inoo ahaayeen kuwo inoogu muhiimsan. Mid ka mid ah xigashoooyinkiisa maqaalkaas ayaa sheegay in
18 Runtii waxaan idinku leeyahay, Intaan cirka iyo dhulku idlaan, xaraf ama dhibic keliya ka idlaan mayso sharciga ilaa ay wada noqdaan. 19 Sidaa darteed kii jebiya qaynuunnadan kuwa ugu yar midkood, oo sidaas dadka u bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan uga yar boqortooyadii jannada, laakiin kii yeela oo bara, waxaa loogu yeedhi doonaa kan weyn boqortooyadii jannada. (Matayos 5: 18-19)
Digniinta: Marna yuusan Dhaqanku ka badan Tawreedka
Sidaas ma noqon lahayd xigmad taam ah in si fudud fekir ka soo saaro Buuggaagtii Muuse (Moses) dhaqan kasta aawgiis. Dhab ahaantii, Nebi Ciise Masiix ayaa si xoogan u dhaleeceeyay Yuhuuddii wakhtigaas joogtay sababtoo ah waxay wax walba ka hormariyeen ‘dhaqankii’xeerkoodii. Waxaan ka arki karnaa in khilaafkuu la galay hoggaamiyayaashii Yuhuudda inuu iyaga ku yidhi:
3 Wuu u jawaabay oo ku yidhi, Idinkuba maxaad amarkii Ilaah uga gudubtaan xeerkiinna aawadiis? 4 Waayo, Ilaah wuxuu amray, Aabbahaa iyo hooyadaa maamuus, oo Kan aabbihii ama hooyadii caayaa, dhimasho ha ku dhammaado. 5 Laakiin waxaad leedihiin, Kan aabbihii ama hooyadii ku yidhaahda, Wixii aan idiin tari lahaa, hadiyad baan Ilaah ugu bixiyey, 6 aabbihii ama hooyadii maamuusi maayo. Xeerkiinna ayaad erayga Ilaah ku buriseen. 7 Labawejiilayaalow, Isayos aad buu wax idiinka sii sheegay markuu yidhi, (Matayos 15: 3-7)
Digniintani ee Nebiga waa mid aad u cad in marnaba fariintu Tawreed burburin ‘dhaqanka’ aawgiis.
Maragfuridda ee Maanta Tawreedka ayaa taageeraya Buuggag ee Badda Dhimatay
Jaangooyada tusmo ah soo socda waxay muujinaysaa in taariikhaha qoraal gacmeedyada horrayn jiray ee Tawreed, (taas oo ah mid ka mid ah mabaadiida ugu weyn ee loo isticmaalo in canbaaraynta qoraal ahaaneed – sayniska ee go’aaminta isku halaynta ee buug – fiiri qoraalkayga lagu daabacay halkan), taariikhda Buuggag Badda Dhimatay 200 B.C. Taas macnaheedu waa in Tawreedka labada Nabi Maxamed (NNKH) iyo Nabi Ciise Masiix (NNKH) ayaa la tilmaamayaa in uu yahay dhab ahaan la mid ah sida aan maanta u isticmaalno.
Tani waa mid qiimo inoo leh innagoo dhan si aynu dib ugu noqono Kutubta. Haddaba, waxaan dhisi karnaa aasaaska ogaynta wixii nebiyaddu ay sheegeen intii aan noqon kuwo wareersan.